Iyo 3 Mishumo Yese B2B CMO Inoda Kupona uye Kubudirira mu2020 | Martech Zone
Sezvo hupfumi hunotenderera padhuze nehupfumi uye mabhajeti emakambani akaderedzwa, chokwadi chevatengesi veB2B gore rino ndechekuti madhora ese anoshandiswa anozobvunzwa, kuongororwa, uye kunofanirwa kusungirwa zvakananga kune mari. Vatungamiriri vekutengesa vanofanirwa kuve laser vakatarisana nekuchinjisa bhajeti yavo kumatekiniki uye zvirongwa zvinoenderana neicho chaicho mutengi uye kudyidzana nekutengesa kuzadzisa zvinangwa zvemari zvegore.
Asi CMO ichaziva sei kana ivo vari kuisa mari muzvirongwa zvakanaka uye matekiniki kana vasina masosi akavimbika e data uye analytics yavanowana? Vachagonesa sei avo vanokosha vezvemabhizimusi uye vechikwata chevakuru kuti kushambadzira haisi mari yekushandisa asi kudyara mune remangwana mari uye injini yekukura kune bhizinesi?
Nebhajeti yakadzikiswa uye zvimwe zvipingamupinyi zvine hukama neCOVID-19, kuwana kune yakavimbika data uye analytics kwakakosha kupfuura nakare kose nekuti zvinogonesa maCMO nevatungamiriri vekutengesa kuratidza ROI, kusunga zviitiko zvekushambadzira zvakananga kumari, uye kuyedza matekiniki akasiyana siyana nemikana yekuziva ramangwana investments. Vashambadzi, nehunhu, vanofanirwa kuve vanyori venhau — saka sei tisingatarisiri kutaura nyaya nedata redu? Izvi zvinofanirwa kunge zviri zvitafura zvematafura-mu2020 uye mberi.
Chokwadi chiripo ndechekuti, kunyangwe vatungamiriri vekutengesa vanogona kuwana zviuru zvezviuru zvemashoko uye mazana emishumo, vangangotarisa pane izvo zvinokanganisa bhizinesi kunyanya kana pamusika uchichinja nekukurumidza. Ini ndakazvipeta pasi kune izvo zvandinoona seaya matatu akanyanya kuomesa mishumo iyo maCMO anofanirwa kuve nawo pamunwe wavo izvozvi:
MQL dzenyu dziri kuburitsa mari here? Unogona kuzviratidza here? Zvinotaridza senge iri nyore uye yakatwasuka pfungwa yekukwanisa kutsvaga sosi yekushambadzira yemutungamiriri uye kuona kuti data 'rakapihwa mukana' pamwe nemukana wekupedzisira pamwe nemari inobatana.
Zvisinei, muchokwadi, kutengesa kweB2B kwakareba mukureba uye kunoshamisa kunzwisisa, kunosanganisira vanhu vazhinji paakaunzi uye akawanda ekubata nzvimbo uye makwara parwendo rwevatengi. Uye zvakare, kutengesa kunowanzo kurudzirwa kuti vagadzire ivo vega vatungamiriri vanoguma vachikwikwidza kana kunyanyisa kupfuura kushambadzira-inogadzirwa inotungamira muCRM. Nekuda kwekuona hutsvene hweiyi data uye inowirirana mushumo (s), zvakakosha kuti CMO inyatsoenderana nemusoro wekutengesa zvine chekuita nedanho rekugadzira zvinotungamira nemikana.
Pro Tip: Chero ani pakutanga akatanga kutungamira (kushambadzira kana kutengesa) anofanirwa kuteedzera nzira yese yekugadzira mukana kuitira kuchengetedza kuyerera kwedata. Imwe bhenefiti yeiyi ndeyekuti iwe unozogona kuenderana uye nekuyera kuyera pakati nepakati nguva yekuvhara.
Mapaipi Velocity Chirevo
Iwe unoratidza sei-kuburikidza nedatha-kuti kushambadzira kunoenderana nekutengesa? Vatungamiriri vekutengesa vanotaura nezvehukama hwavo hwepedyo nekutengesa nguva dzose (verenga: nguva dzose) asi vanoda kuratidza kuti kwavo kushambadzira vanokwanisa vatungamiriri (MQLs) vane mwero wakakura wekugamuchirwa nekutengesa, zvinoreva kuti kuvashandura vatengese vatungamiriri vanokwanisa (SQLs) . Masangano ekushambadzira akagadza nzira yepamutemo yekutengesa kubvuma nekuramba zvinotungamira Uye kuunganidza data rehunhu pazvikonzero zvekurambwa ndeaya akagadzirirwa kubudirira mukuzivisa uye kuyera munzvimbo ino yakaoma.
Kune iwo masangano akapihwa account-based kushambadzira (ABM), izvi zvinoshandura mutambo zvachose, nekuti ivo vashambadzi vari kubatanidza yavo portfolio yemazita mazita kumutengesi portfolio yemazita akaundi. Nekudaro, icho chinangwa chingave chekuyera mashandiro ehuviri hwakabatanidzwa (kushambadzira nekutengesa) kushanda (kuburitsa mari) vs kugona kweumwe neumwe sekutsanangurwa pamusoro. Masangano mazhinji eB2B haasati (achiri) kuita ABM kuzivisa pachiyero cheMQL kune SQL nekuti vane zvimiro zvekubika zvakasarudzika uye, nekudaro, hapana kukurudzira kwekutaura pamwechete.
Pro Tip: Chinja zvinokurudzirwa uye mubairo kumatimu ese ari maviri, kupa mubairo nhengo dzese dzechikwata pachishandiswa metric dzakagovaniswa senge nhanho yekubatana pakati pekutengesa uye kushambadzira account account, huwandu hweMQLs inoshandura kuita SQL, uye nhamba yeSQL inoshanduka ikava mikana .
Zvemukati Kubudirira Mushumo
Nepo mazhinji ekushambadzira zvikwata nhasi akagadzira akasimba zvemukati marongero anoenderana nevatengi manas, ivo vachiri kunetsekana kugadzira zvinoita senge zvakaringana zvirimo zvemukati zvekuita mishumo iyo inoratidza yakakwira- uye yakaderera-inoita zvirimo. Kunyange zvirimo zvacho zvingave zviri nani mukirasi, hazvina zvazvinobatsira kunze kwekunge zvikwata zvekushambadzira zvikaratidza kuti nei zvichikosha uye kuti zvine chekuita nei pabhizinesi.
Kazhinji, mishumo yekutengesa inotora a munhu tarisa, (kureva nzendo dzevatengi kana mafambiro ehupenyu), kuteedzera kukanganisa kwemari, asi iwe unogona zvakare kufunga nezvekupupura nekutarisa zvemukati uye kuyera imwe neimwe yefaindi kusvika pamari. Mune sisitimu yakavakwa-naka, iwo mabhatani akanangana kuburikidza nerekodhi yemunhu. Tichipiwa proxy yedu yemari vanhu uye chiyero chedu chemukati vanhu (uye kushandisa kwavo zvirimo), zvese zvemukati zvinobata zvinogona kunzi imari. Iyo yakafanana data inotsigira rwendo rwevatengi, ingo tariswa kubva pane zvemukati maonero.
Pro Tip: Kana kupa mari kune zvemukati zvemukati zvinhu zvakawandisa zvekutambanudza, tanga nekupa zvemukati kune MQLs. Iwe unogona kuodha zvemukati zvako nenhamba yeMQL zvinhu zvese zvakagadzirwa. Uye iwe unogona ipapo kurema iyo MQL kupatsanura pane echinhu chimiro.
Tags: bhizinesi kune bhizinesimukuru wezvekutengesacmokugutsikana kushandaCOVID-19rwendo rwevatengitungamira-kune-marimabasa ekushambadziravatungamiriri vekutengesaKushambadzira kuitamqlMapaipi velocityMapaipi velocity mushumokubika